Bulbul : Episode - 166
Aakar October 31, 2012
Listen to Bulbul Episode-166 शुभ समय, शुभ पल, शुभ क्षण,शुभ सन्ध्या, शुभ रात्री !!! रात्री बसाइ को यो अर्को नयाँ अंक मा केही रात्री गन्थनको साथमा सुमधुर गजलहरु लिएर, सदा झैँ आज पनि प्रस्तोता अच्युत घिमिरे उपस्थित हुनुभएको छ । बुलबुल एउटा इरानी चरा हो । रात्रीको समयमा गाउँदै हिंड्‍ने यो चरा गजलको प्रतीक मानिन्छ । इरानदेखि नेपाल सम्मको यात्रा गरेकी बुलबुल, नेपालका लागि नौलो हैन । यो सर्वव्यापी छ । गजलका रागहरु जहाँ जहाँ अलापिन्छन्, त्यहीं त्यहीं यसको उपस्थिति रहन्छ । प्रेम, विरह, उत्साह, उमंग अनि थुप्रै मनका संवेगहरु बुलबुलले समेट्‍छ । बुलबुल सुन्न थालेपछि हामी सबै एउटा समूहमा समेटिन्छौं र बुलबुल भित्र आफैंले आफ्‍नो नाम दिन्छौं - बुलबुललियन । हामी यहाँ एकाकार भएर लाग्छौं, गजलको भावनात्मक सहवासमा । "एउटा प्रेमको बिरुवा हामी रोप्छौं.....युग युग सम्म लगाएर यो प्रीतलाई अमर गर्छौँ।" Download Bulbul : Episode-166
Bulbul : Episode - 165
Aakar October 24, 2012
Listen to Bulbul Episode-165 शुभ समय, शुभ पल, शुभ क्षण,शुभ सन्ध्या, शुभ रात्री !!! रात्री बसाइ को यो अर्को नयाँ अंक मा केही रात्री गन्थनको साथमा सुमधुर गजलहरु लिएर, सदा झैँ आज पनि प्रस्तोता अच्युत घिमिरे उपस्थित हुनुभएको छ । बुलबुल एउटा इरानी चरा हो । रात्रीको समयमा गाउँदै हिंड्‍ने यो चरा गजलको प्रतीक मानिन्छ । इरानदेखि नेपाल सम्मको यात्रा गरेकी बुलबुल, नेपालका लागि नौलो हैन । यो सर्वव्यापी छ । गजलका रागहरु जहाँ जहाँ अलापिन्छन्, त्यहीं त्यहीं यसको उपस्थिति रहन्छ । प्रेम, विरह, उत्साह, उमंग अनि थुप्रै मनका संवेगहरु बुलबुलले समेट्‍छ । बुलबुल सुन्न थालेपछि हामी सबै एउटा समूहमा समेटिन्छौं र बुलबुल भित्र आफैंले आफ्‍नो नाम दिन्छौं - बुलबुललियन । हामी यहाँ एकाकार भएर लाग्छौं, गजलको भावनात्मक सहवासमा । "एउटा प्रेमको बिरुवा हामी रोप्छौं.....युग युग सम्म लगाएर यो प्रीतलाई अमर गर्छौँ।" Download Bulbul : Episode-165
दशैँको शुभकामना ! [With Malshree Dhun Cover]
Aakar October 19, 2012
दशैँ हाम्रो घर आँगनमा आइसकेकोछ, चारैतिर उल्लास र खुशीयाली छाएकोछ । अध्ययन तथा रोजगारीको शिलशिलामा देश अनि विदेशका विभिन्न ठाउँमा रहेका व्यक्तिहरु धमाधम आफ्नो घर फर्कने क्रम जारी छ । पहिले पहिले दशैँमा नयाँ लुगा लाउने, अनि मिठा मिठा परिकारहरु खान पाइने भनेर रमाइलो लाग्थ्यो, अब यसमा मेरा लागि अर्को रमाइलो नि थपिएकोछ, कम्तिमा वर्षमा एकपटक स्कुलमा संगै पढेका साथिभाइ, आफ्ना छरछिमेक र आफन्तहरुसँग भेटघाट गर्न पाइन्छ । कामको व्यस्त दैनिकीबाट हप्तादिन फुर्सदले रमाइलो गर्न पाइन्छ । जोड्दै र खोज्दै जाने हो भने, दशैँ रमाइलो लाग्ने कारण अनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कारणहरु सयौँ निस्कन सक्छन् । यसर्थ पनि हाम्रा पितापूर्खाले निकै राम्रा चलनहरु चलाएका रैछन् भन्ने लाग्छ । देश विदेशमा रहनुभएका मेरा सम्पूर्ण साथीभाइ, इष्टमित्र, आफन्त तथा “आकारपोष्ट”का सम्पूर्ण पाठक तथा शुभचिन्तकहरुमा बडादशैँ २०६९ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना ! तपाईहरुको हरेकपल सुखमय रहोस् । यसवर्ष दशैँको अवसर पारेर गायक सुगम पोखरेलले गाएको गित '’दशैँ तिहार” निकै चर्चामा रहेकोछ । अपलोड गरिएको ५ दिनभित्रै युट्युबमा विभिन्न
नेपाल प्रहरी फेसबुकमा [Nepal Police Joins Facebook]
Aakar October 18, 2012
यो हप्ता देखि नेपाल प्रहरीले फेसबुकमा आफ्नो छुट्टै पेज बनाएर, फेसबुकबाटै सर्वसाधारणका पिरमर्का, गुनासा आदि सुन्नथालेकोछ । सर्वसाधारणका गुनासा/कम्प्लेन सुन्ने, प्रहरी संगठनका कुराहरु बाहिर ल्याउने, घटिरहेका घटना तथा गतिविधिहरुको जानकारी दिने, सूचना आदान-प्रदान गर्ने, उदेश्यले फेसबुकको लोकप्रियता सँगै नेपाल प्रहरीले फेसबुकमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको हो । पछिल्लो तथ्यांक अनसार करिब १८ लाख फेसबुक प्रयोगकर्ताहरु नेपालमा रहेकाछन् । अक्टोबर १२ मा ‘पेज’ बनाइएको भएपनि, ५७ औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा अक्टोबर १६ मा नेपाल प्रहरीले फेसबुक पेज सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिएकोथियो । फोटो, लिंक आदि सेयर गरिएको फेसबुक पेजमा यो ब्लग तयार पार्दा सम्म ४,८४९ जनाले लाइक गरेकाछन् । नेपाल प्रहरी फेसबुक पेज मार्फत हामी माझ नजिक त आएको छ, तर पेज निरन्तर अपडेट गरिरहनु र सूचना प्रवाह गरिरहनु चुनौतीपूर्ण काम रहेकोछ । गत वर्ष महानगरिय ट्राफिक प्रहरीले पनि आफ्नो फेसबुक पेज बनाएको थियो । फेसबुक पेज बनाएको केही महिनासम्म, काठमाडौँको ट्राफिक गतिविधिहरु प्राय अपडेट भइरहन्थ्यो तर विचमा अपडेट गर्न छोडियो यद्यपि अक्टोबर महि
Bulbul : Episode - 164
Aakar October 17, 2012
Listen to Bulbul Episode-164 शुभ समय, शुभ पल, शुभ क्षण,शुभ सन्ध्या, शुभ रात्री !!! रात्री बसाइ को यो अर्को नयाँ अंक मा केही रात्री गन्थनको साथमा सुमधुर गजलहरु लिएर, सदा झैँ आज पनि प्रस्तोता अच्युत घिमिरे उपस्थित हुनुभएको छ । बुलबुल एउटा इरानी चरा हो । रात्रीको समयमा गाउँदै हिंड्‍ने यो चरा गजलको प्रतीक मानिन्छ । इरानदेखि नेपाल सम्मको यात्रा गरेकी बुलबुल, नेपालका लागि नौलो हैन । यो सर्वव्यापी छ । गजलका रागहरु जहाँ जहाँ अलापिन्छन्, त्यहीं त्यहीं यसको उपस्थिति रहन्छ । प्रेम, विरह, उत्साह, उमंग अनि थुप्रै मनका संवेगहरु बुलबुलले समेट्‍छ । बुलबुल सुन्न थालेपछि हामी सबै एउटा समूहमा समेटिन्छौं र बुलबुल भित्र आफैंले आफ्‍नो नाम दिन्छौं - बुलबुललियन । हामी यहाँ एकाकार भएर लाग्छौं, गजलको भावनात्मक सहवासमा । "एउटा प्रेमको बिरुवा हामी रोप्छौं.....युग युग सम्म लगाएर यो प्रीतलाई अमर गर्छौँ।" Download Bulbul : Episode-164
फेसबुक पेजमा लाइक बढाउने सात तरिका
Aakar October 16, 2012
कुनै पनि ब्रान्डको लागि हिजोआज फेसबुक पेज वरदान सावित भएकोछ । नेपालमा पनि फेसबुकको लोकप्रियता धेरै रहेका कारण, केही ब्रान्डहरुले आफ्नो फेसबुक पेज सञ्चालनमा ल्याएकाछन् । सोसल मिडिया मार्केटिङको ‘कन्सेप्ट’ भर्खर नेपालको बजार भित्र प्रवेश गर्नथालेकोछ, यसअर्थमा हेर्ने हो भने केही सिमित ब्रान्डहरु बाहेक अरु खासैले फेसबुक पेजबाट अधिकतम लाभ लिनसकेकाछैनन् । केहीले देखेर र केहीले सुनेर पेज बनाउने गर्छन्, तर त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसबाट के लाभ लिन सकिन्छ भन्ने तर्फ भने खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । फेसबुक पेजमा नेपाली ब्रान्डको कुरा गर्दा, एनसेल, एस ट्राभल्स आदि ‘लाइक’का हिसाबले अग्रपंक्तिमा आउँछ । आफ्नो ‘ब्रान्ड’को लागि कुन सोसल मिडिया च्यानल उपयुक्त हुन्छ, कस्तो ‘स्ट्राटिजी’ बनाउनुपर्छ, पेज कसरी अपडेट गर्नुपर्छ, पेजबाट ब्रान्डले के फाइदा लिनसक्छ आदि कुराहरु कुनै दिन गरौँला । आज भने फेसबुक पेजमा लाइक कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दैछु । मानौँ तपाई ब्लगर हुनुहुन्छ वा कुनै व्यवसायी हुनुहुन्छ र तपाई आफ्नो ब्रान्डको उपस्थिति अनलाइनमा बनाउन चाहनुहुन्छ । सोसल मिडियामा उपस्थिति जनाउन तपाईले फ
Bulbul : Episode - 163
Aakar October 10, 2012
Listen to Bulbul Episode-163 शुभ समय, शुभ पल, शुभ क्षण,शुभ सन्ध्या, शुभ रात्री !!! रात्री बसाइ को यो अर्को नयाँ अंक मा केही रात्री गन्थनको साथमा सुमधुर गजलहरु लिएर, सदा झैँ आज पनि प्रस्तोता अच्युत घिमिरे उपस्थित हुनुभएको छ । बुलबुल एउटा इरानी चरा हो । रात्रीको समयमा गाउँदै हिंड्‍ने यो चरा गजलको प्रतीक मानिन्छ । इरानदेखि नेपाल सम्मको यात्रा गरेकी बुलबुल, नेपालका लागि नौलो हैन । यो सर्वव्यापी छ । गजलका रागहरु जहाँ जहाँ अलापिन्छन्, त्यहीं त्यहीं यसको उपस्थिति रहन्छ । प्रेम, विरह, उत्साह, उमंग अनि थुप्रै मनका संवेगहरु बुलबुलले समेट्‍छ । बुलबुल सुन्न थालेपछि हामी सबै एउटा समूहमा समेटिन्छौं र बुलबुल भित्र आफैंले आफ्‍नो नाम दिन्छौं - बुलबुललियन । हामी यहाँ एकाकार भएर लाग्छौं, गजलको भावनात्मक सहवासमा । "एउटा प्रेमको बिरुवा हामी रोप्छौं.....युग युग सम्म लगाएर यो प्रीतलाई अमर गर्छौँ।" Download Bulbul : Episode-163
Bulbul : Episode - 162
Aakar October 03, 2012
Listen to Bulbul Episode-162 शुभ समय, शुभ पल, शुभ क्षण,शुभ सन्ध्या, शुभ रात्री !!! रात्री बसाइ को यो अर्को नयाँ अंक मा केही रात्री गन्थनको साथमा सुमधुर गजलहरु लिएर, सदा झैँ आज पनि प्रस्तोता अच्युत घिमिरे उपस्थित हुनुभएको छ । बुलबुल एउटा इरानी चरा हो । रात्रीको समयमा गाउँदै हिंड्‍ने यो चरा गजलको प्रतीक मानिन्छ । इरानदेखि नेपाल सम्मको यात्रा गरेकी बुलबुल, नेपालका लागि नौलो हैन । यो सर्वव्यापी छ । गजलका रागहरु जहाँ जहाँ अलापिन्छन्, त्यहीं त्यहीं यसको उपस्थिति रहन्छ । प्रेम, विरह, उत्साह, उमंग अनि थुप्रै मनका संवेगहरु बुलबुलले समेट्‍छ । बुलबुल सुन्न थालेपछि हामी सबै एउटा समूहमा समेटिन्छौं र बुलबुल भित्र आफैंले आफ्‍नो नाम दिन्छौं - बुलबुललियन । हामी यहाँ एकाकार भएर लाग्छौं, गजलको भावनात्मक सहवासमा । "एउटा प्रेमको बिरुवा हामी रोप्छौं.....युग युग सम्म लगाएर यो प्रीतलाई अमर गर्छौँ।" Download Bulbul : Episode-162
सावधान ! तपाईको ‘फेसबुक प्राइभेट म्यासेज’ फेसबुक वालमा देखिएको हुनसक्छ…
Aakar September 30, 2012
फेसबुक ’को ‘प्राइभेट’ म्यासेज फेसबुक टाइमलाइनमा ‘वाल पोष्ट’ को रुपमा देखिएको कुरा करिब हप्ता दिन देखि इन्टरनेटमा चर्चाको विषय बन्दै गएकोछ । दर्जनौँ ब्लग र टेक्नोलोजी साइटहरुले ‘फेसबुक’ को प्राइभेट म्यासेज वालमा देखिएको कुरा उठाइरहँदा, फेसबुकले भने “वाल पोष्ट”मा प्राइभेट म्यासेज पोष्ट नगरिएको दावी गरेकोछ । फेसबुकले त्यस प्रकारको दावी गरिरहँदा पनि फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले भने ‘वाल’मा पुराना आफ्ना ‘प्राइभेट’ म्यासेजहरु देखिरहेका छन् । सन् २००७ देखि सन् २००९ सम्मका प्राइभेट म्यासेजहरु फेसबुकवालमा देखिएको हो । पक्कै पनि “प्राइभेट म्यासेज” प्राइभेट नै रहनुपर्छ तर तपाई हामीले थाहा नै नपाइ हाम्रा ‘गोप्य’ भनिएका संवादहरु “फेसबुक वालमा” छरपस्ट भइरहेकाछन् । यसकारण तपाई यसबारेमा सजग रहनु जरुरी छ । अहिलेको फेसबुक च्याट पहिलेको फेसबुक म्यासेज भन्दा फरक हो, पहिले च्याट ‘सेभ’ भएर म्यासेजमा बस्दैनथियो । त्यसबेला च्याट र फेसबुक म्यासेज फरक थियो, सायद यसैकारण पनि त्यसबेलाका फेसबुक म्यासेज वालमा अहिले देखिएकाहुन् भन्ने अनुमान गरिएकोछ । मेरो टाइमलाइनमा साथिहरुबाट पोष्ट गरिएका कुराहरु मैले मात्र देख्न स
Bulbul : Episode - 161
Aakar September 26, 2012
Listen to Bulbul Episode-161 शुभ समय, शुभ पल, शुभ क्षण,शुभ सन्ध्या, शुभ रात्री !!! रात्री बसाइ को यो अर्को नयाँ अंक मा केही रात्री गन्थनको साथमा सुमधुर गजलहरु लिएर, सदा झैँ आज पनि प्रस्तोता अच्युत घिमिरे उपस्थित हुनुभएको छ । बुलबुल एउटा इरानी चरा हो । रात्रीको समयमा गाउँदै हिंड्‍ने यो चरा गजलको प्रतीक मानिन्छ । इरानदेखि नेपाल सम्मको यात्रा गरेकी बुलबुल, नेपालका लागि नौलो हैन । यो सर्वव्यापी छ । गजलका रागहरु जहाँ जहाँ अलापिन्छन्, त्यहीं त्यहीं यसको उपस्थिति रहन्छ । प्रेम, विरह, उत्साह, उमंग अनि थुप्रै मनका संवेगहरु बुलबुलले समेट्‍छ । बुलबुल सुन्न थालेपछि हामी सबै एउटा समूहमा समेटिन्छौं र बुलबुल भित्र आफैंले आफ्‍नो नाम दिन्छौं - बुलबुललियन । हामी यहाँ एकाकार भएर लाग्छौं, गजलको भावनात्मक सहवासमा । " एउटा प्रेमको बिरुवा हामी रोप्छौं.....युग युग सम्म लगाएर यो प्रीतलाई अमर गर्छौँ।" Download Bulbul : Episode-161